I-Borgo dei Laghi
indawo yethu yabakhenkethi ibekwe eRevine, kwindawo ezolileyo yeziko lembali, ngokuhlonipha ulwakhiwo olunamatye aveziweyo kunye nokugcina izithethe kunye nembali kangangoko kunokwenzeka.
Indlu, kunye nomnyango wayo, ixhotywe kumgangatho ophantsi kunye nekhitshi enkulu-igumbi lokuhlala elixhotyiswe ngesitofu sokhuni kunye nendawo yomlilo apho kunokwenzeka ukwenza i-grills egqwesileyo.
Ukunyuka ukuya kumgangatho wokuqala ngezinyuko zomthi, sinegumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa, kunye nethuba lokuba neebhedi ezimbini ngaphezulu kwi-mezzanine.
Isakhiwo sinikeza umbala weTV.
Iindwendwe zinokungena kwiyadi yangaphakathi.Indawo yokupaka yasimahla iyafumaneka kufutshane.Indawo ... ..ilungele iintsapho kunye namaqela abantu.
phakathi kweVenetian Pre-Alps kunye neenduli zeTreviso ilele idolophu yaseRevine Lago, eneempawu zayo zamatye kunye nokugcinwa kwembali kunye nenkcubeko.
Iindawo eziphambili zokundwendwela: Ingcwele yaseSan Francesco da Paola: yicawe yaseRevine, eyakhiwa phakathi kwe-1677 kunye ne-1702 kwiliwa leNtaba iFrascon, ngezantsi nje kwenqaba yamaxesha aphakathi enegama elifanayo, ngumfundisi werhamente uDon Giovanni Domenico Cumano. , libonisa ngokupheleleyo iikhonsepthi eyamkelwe umakhi yayo ogama ukwakheka, ezenzeka kumzi woonongendi le minims e Venice, yabalasela njengenxalenye yonqulo olukhulu ngomoya yentlupheko kunye nothando kwabanye, ngokutsho iimfundiso umsunguli uMyalelo.
- Izitrato ezindala zeRevine ezinyuka zisiya eS. Francesco
- Le Lame, indlu yokuhlamba yenkulungwane yeshumi elinesithoba. Ekupheleni kwenkulungwane yeshumi elinesithoba yayixhotyiswe ngezitya ezisecaleni kwaye ngasemva indlu yokuhlamba yongezwa kwaye abafazi babelapho ukuze bahlambe impahla (eyakwiidolophana zase S. Maria nase di Lago endaweni yoko yayisenziwa echibini) kuba wonke yaba yindawo elihle kwezentlalo kunye namanzi kwakhona kususelwa kuyo ukusetyenziswa ekhaya. kuba amanzi okusela kukho imithombo (omnye wabo yaba yinto) kunye nakummandla Pian del POS iqula yaba wemba (current kamasipala ibuyiselwe kakuhle) yango-1699
-IPian delle 'Femene', kumphakamo weemitha ezili-1000 ukusuka apho ungabuka ithafa leTreviso kunye nendawo yaseBelluno.
- Izitalato ezimxinwa zechibi ezehla echibini laseSan Giorgio.
- I-Pian della Posa, indawo ye-paragliding kunye ne-hang gliding
-I-Sottocroda, efihliweyo emva kwenduli, indawo yokuqala yokufikelela eLa Posa
-amachibi amabini anomkhenkce anomtsalane kunye neempawu zomkhenkce zaseSanta Maria nasedi Lago, aziwa njengeRevine Lakes. Kukho iindawo ezintathu ezixhotyisiweyo zomdla woluntu koomasipala baseRevine Lago naseTarzo.ESanta Maria di Revine Lago, indawo eluhlaza exhotyiselwe iipiknikhi.